Rikoooo - ဗြိတိန်နိုင်ငံလေကြောင်း Jetstream 31 / 32 FS2004 DOWNLOAD
ဗြိတိန်နိုင်ငံကလေကြောင်း Jetstream 31 / 32 FS2004
အရွယ် 10.49 ကို MB
downloads ရယူရန္6086
အတွက် FSX သဟဇာတမူကွဲ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
Jetstream 31 နှင့် 32 ဖြည့်စွက်! FS2004 များအတွက် native, ဒိန်းမတ်၏ Sun-Air လေကြောင်းလိုင်း, အဘိဓါန် Eastern လေကြောင်းလိုင်း (ဗြိတိန်), ယူနိုက်တက် Express ကို (သမိုင်းဆိုင်ရာ), တော်ဝင်ရေတပ် T3 အဖြစ် repaints ထုံးစံအသံ, လေယာဉ်မှူးအခန်း 2D နှင့် 4D နှင့်3ပါဝင်သည်။ ညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ပါ.
အဆိုပါ Jetstream 31 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒေသဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းစျေးကွက်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖိအားပေးထားတဲ့လေယာဉ်ကိုယ်ထည်နှင့်အတူ, သေးငယ်တဲ့အမွှာ-တာဘိုပရော့လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Jetstream 31, ပထမဦးဆုံးတရာအများအပြား 28s အ 1980s ကာလအတွင်းတည်ဆောက်ထားခဲ့ကြသည် 29 ဇွန်လ 1982 ရက်နေ့တွင်ဗြိတိန်တွင် certificated ခံရ, 31 မတ်လ 1980 အပေါ်ပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။ 1985 ခုနှစ်တွင်နောက်ထပ်အင်ဂျင်အဆင့်မြှင့်ကိုလည်း Jetstream 1988 အဖြစ်လူသိများ Jetstream စူပါ 31 အဖြစ် 32 အတွက်ပျံသန်းသောစီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှု 1993 386 / 31s ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့်အချိန်အားဖြင့် 32, သည်အထိဆက်လက်။
Aero တပ်မှူး 560A FS2004
Dassault မာကျူရီ 100 FS2004
Socata TB10 တိုဘာဂိုအပြည့်အဝ Package ကို FS2004